News - Civen waxay kugu martiqaadaysaa bandhigga (PCIM Europe2019)
Ku saabsan PCIM Europe2019
Warshadaha Korontada waxay ku shirayeen Nuremberg tan iyo 1979. Bandhiga iyo shirku waa hormuudka caalamiga ah ee soo bandhigaya alaabta hadda jirta, mawduucyada iyo isbeddellada qalabka elektiroonigga ah iyo codsiyada.Halkan waxa aad ka heli kartaa dulmar ku saabsan xaqiiqooyinka iyo tirooyinka ugu muhiimsan dhacdadan.
PCIM Europe waa hormuudka bandhiga caalamiga ah iyo shirka ee korontada iyo codsiyada.Tani waa halka ay ku kulmaan khubaro ka socda warshadaha iyo tacliinta, halkaas oo isbeddello iyo horumarro cusub loo soo bandhigo dadweynaha markii ugu horreysay.Sidan oo kale, dhacdadu waxay muraayad u tahay dhammaan silsiladda qiimaha - laga bilaabo qaybaha, waxay kaxaysaa xakamaynta iyo baakadaha nidaamka ugu dambeeya ee caqliga.
Soo-booqdayaasha ganacsiga caalamiga ah waa khabiiro iyo go'aan-sameeyayaal inta badan ka socda maamulka, badeecada iyo naqshadeynta nidaamka, wax iibsiga iyo sidoo kale waaxaha maamulka R&D.Bandhig khaas ah oo gaar ah, PCIM Yurub waxaa lagu kala soocaa jawi shaqo oo degdeg ah.Soo-booqdayaashu waxay ka soo qaybgalaan bandhigga si ay ugala hadlaan dhibaatooyin gaar ah iyo habab shaqsiyeed ee goobta bandhigga, iyagoo si toos ah u bilaabaya go'aannada maalgashiga ee goobta.76% dadka dibadaha ka yimid waxay ka yimaadeen Yurub, 19% waxay ka yimaadeen Aasiya iyo 5% waxay ka yimaadeen Ameerika.
PCIM (Beddelka Awooda iyo Dhaqdhaqaaqa Caqliga ah)waa kulanka hogaaminaya Yurub ee khabiirada ku takhasusay korantada korantada iyo codsiyadooda dhaqdhaqaaqa caqliga leh iyo tayada awooda.
Civen waxay booqatay PCIM marar badan, waxaanu u adeegnaa macaamiisha aduunka oo dhan, intooda badan waxay noqdeen saaxiibo .Waxaan si buuxda u qancin karnaa baahida macaamiisha heerka dhexe iyo sare iyada oo aan loo eegin wax soo saarka ama waxqabadka.
Iyada oo asalka maaliyadeed ee xooggan iyo faa'iidada kheyraadka ee shirkadda waalidka.Civen ayaa awood u leh in ay si joogto ah u wanaajiso alaabadayada si ay ula qabsato tartanka suuqa oo aad u xanaaq badan.
Waxaad naga heli doontaa hoolka 7, booth 7-526 agin.
Taariikhda: May 7-deeda, 2019
Kudar: Xarunta Bandhiga Nuremberg